Coronavirus Nahitana marary i Toamasina sy Fianarantsoa
Ny tatitra nataon’ny Pr Volontiana Hanta Marie Danielle omaly atoandro dia tsy niova ny isan’ny olona voa satria tsy mbola tsy nisy olona voatily.
Nijanona ho 43 ny olona voamarina fa voa ho an’ny atoandro. 32 tsy mitondra soritr’aretina, saingy arahi-maso noho ny fitondrana ny aretina. Ny 5 amin’ny 11, dia tsy dia atahorana: manavinavy, mangorangorana, mikohaka. Ny 6 sempotra, ary ny 1 dia mila oxygène. Voahara-maso ny toe-pahasalaman’izy 43, ary mahazo fanafody.. Mbola ao anaty fanaraha-maso izy ireo, fa rehefa tonga ny fotoana dia hotenenina hoe: firy ny sitrana, hoy io Profesora io. Nilaza kosa ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina ny hariva, fa nisy tranga vaovao niisa 3, izay nampitombo ny antontan’isa rehetra ho 46. Ny 2 dia tao Toamasina ka ny iray tamin’izy ireo nandeha tamin’ny sidin’ny MK 288, ary ny fahatelo dia tany Fianarantsoa, izay ramatoa 61 nandeha tamin’io sidina io ihany ny 19 martsa lasa teo. Taorian’ilay tranga tany Morondava izany, dia nisy tranga vaovao hita tany ivelan’Antananarivo, izay mampoitombo ny ahiahy hatrany, ka tokony hahamailo bebe kokoa.
Ny olona rehetra avy any ivelany dia voafehy. Mba hifehezana azy tanteraka, dia ireo rehetra tong any 11 martsa, izay mihoatra na nahafeno 15 andro dia atao “test rapide” avokoa, ary homena ny certificat maneho fa salama tsara avokoa koa. Izay nandeha tamin’ny sidina ny 11-12 martsa 2020 dia hatao fitiliana an-kalamanjana, dia mba mandeha fiara manokana eny amin’ny Jumbo Score Ankorondrano, izay efa misy biologiste sy mpitsabo mpanampy eny, izay amin’ny 2 ora ka hatramin’ny 4ora. Ny tonga tamin’’ny sidina ny 14-15 martsa dia eny amin’ny CCI Ivato. Ny ankoatra izay, dia ny 16-17 martsa dia tapitra anio ny 15 andro. Rahampitso 1 aprily dia mankeny amin’ny CCI Ivato avokoa izy ireo. Ho an’ny 18 martsa dia eny amin’ny Jumbo score amin’ny 2ora hatramin’ny 4ora tolakandro. Ny tamin’ny 19 martsa dia eny amin’ny CCI ny tontolo andro, izay be dia be ny sidina sy ny olona satria nihoatra ny 5000 ny olona tonga tamin’ireo sidina ireo. Eo amin’ny 40 moa ireo tamin’ny sidina voamarina fa nitondra ny COvid 19
HAMPITOMBOINA NY TOERAM-PITILIANA
Nanaiky ny hanofana ireo biologiste Malagasy ny IPM, ka hosokafana rehefa vita ny fanofanana ary ampiana ny fampitaovana, ka hisokatra ny laboratoara 3 Malagasy hosahanin’ny Minisiteran’ny fahasalamana sy ny Minisiteran’ny Fampianarana ambony. Tanjona ny 1000 ftiliana isan’andro raha 150 hatramin’ny 200 izao. Ampiasaina ny Centre d’infectionologie eny Ankatso. Laboratoara maro no hovelomina. Ny any Frantsa efa 5000 fitiliana ary hampiakarina ho 12 000 ary mety ho tonga 100 000. Ny hopitaly manara-penitra rehetra napetraka tamin’ny tetezamita izay hita izao fa tena ilaina, dia hatao andraisana fotsiny ireo araha-maso noho ny coronavirus, hoy i Andry Rajoelina.